.: Ko Moe's Electronics Notes :.: February 2010
GPS (Global Positioning System) ကတော့ လူတိုင်းကြားဖူး သိဖူးပီးသားပါ။ ပြောချင်တာက အဲ့ GPS Module တွေနဲ့ ဆက်သွယ် တဲ့အခါမှာ လိုအပ်တာလေးတွေပါ။ များသောအားဖြင့် Serial COM လေးနဲ့ပါပဲ။ Baud Rate ကတော့ နဲနဲ မြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် ပုံမှန် GPRS, Modem နဲ့စာရင်ပေါ့။ သူက NMEA (National Marine Electronics Association) ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းက သုံးတဲ့ တွေပဲသုံးတယ်ဗျာ။ ဥပမာ - GGA ဆိုတဲ့ Command ကို ပေးလိုက်ရင် GPS ရဲ့ Data အားလုံးကို ပြန်ပေးတယ်။ Reply က အောက်မှာပြထားသလိုပေါ့။ Time, Latitude, Longitude, Altitude, .... တွေပါတယ်။
လင့်ခ်ကတော့ NMEA Data ။ အောက်ကပုံက လေးတစ်ခုရဲ့ပုံပါ။ Antenna တော့ ထပ်တပ်ရတယ်။ ပြီးတော့ အမိုးအောက်မှာဆိုရင် Data တွေကမမှန်ပါဘူး။
Posted by ကိုမိုး at Tuesday, February 23, 2010 No comments:
Labels: General, GPS, Hardware, PIC, RS232, Wireless
Posted by ကိုမိုး at Friday, February 19, 2010 No comments:
သာမန် Character display LCD တွေနဲ့ ကွာခြားတဲ့အချက်ကတော့ GLCD က Dot Matrix ပုံစံသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်သုံးတာက Graphic LCD 128x64 Dot Matrix ပါ။ သူ့ပေါ်မှာ စာရေးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပုံဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီ Dot Matrix ပုံစံနဲ့ သွားရပါတယ်။ အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ Dot (pixel) လေးတွေကို ဆက်ပြီးတော့ ပုံဖေါ်လိုက်တာပါပဲ။ ကျန်တဲ့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးက ပုံမှန် LCD module တွေနဲ့အတူတူပါပဲ။ ရေးချင်ရင် အနက်ရောင်လေးအုပ်၊ ဖျက်ချင်ရင် အဖြူရောင်လေး ပြန်အုပ် ဆိုတဲ့သဘောတွေပါပဲ။ ဒီကောင်လေးကို သုံးရင်းနဲ့ ဟိုးအရင် ၁၉၉၇ လောက်က Pascal programming မှာ Graphic mode နဲ့ DOS မှာ Windows, Buttons, Text boxes တွေရေးခဲ့တာလေးတွေကိုတောင် ပြန်သတိရမိတယ်။
Labels: Graphic LCD, Hardware, PIC
Embedded Application တွေကို Mass production ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာ Single Chip solution ကို သုံးကြပါတယ်။ သဘောတရားကတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်း ၂ခုကို Chip တစ်ခုထဲမှာ ပေါင်းပြီးထဲ့လိုက်တဲ့သဘောပါ။
ဥပမာ - Freescale က Energy meter ကိုထုတ်တဲ့နေရာမှာ အရင်က2Chip solution ကို သုံးပါတယ်။ E-Meter အတွက် ADC နဲ့ဆိုင်တဲ့ Chip တစ်လုံးနဲ့ Data collection, calculation, user interface တွေအတွက် MCU တစ်လုံးကို ခွဲပြီးသုံးပါတယ်။ သဘောကတော့ သူတို့အရင် ရှိပြီးသား IC တွေကို ယူသုံးလိုက်တဲ့သဘောပါ။ R & D အဆင့်လောက်ပေါ့။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ခုန E-meter အဆင်ပြေသွားတဲ့ အခါ အဲ့ ၂ လုံးကို ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ Chip တစ်ခုတည်းမှာ Embedded ထဲ့လိုက်တယ်။ Single chip solution ကိုပြောင်းပစ်လိုက်တယ်။
အားသာချက်က ဈေးသက်သာသွားတယ်၊ နေရာပိုထွက်လာတယ်၊ power consumption ကျသွားတယ်။ လိုအပ်ချက်က Mass production ထုတ်မှအဆင်ပြေတယ်။ အောက်ကပုံကတော့ Multi chip and single chip solution ကို ယှဉ်ပြထားတဲ့ပုံပါ။ ဒီစကားအသုံးအနှုန်းက သပ်သပ် အလုပ်လုပ်နိုင်နေတဲ့ Chip ၂ လုံးကို တစ်လုံးတည်းမှာ ပေါင်းပြီး သုံးတဲ့အခါမှာ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။
Posted by ကိုမိုး at Thursday, February 18, 2010 No comments:
Labels: Energy Meter, General, Hardware, Microcontroller
Mifare ကဒ်တွေ (ISO 14443 လို့လည်း ပြောကြပါတယ်)က ခုနောက်ပိုင်း အသုံးအများဆုံး Contactless Card အမျိုးအစားတွေပါ။
Type A က Card ID ၈ လုံးပါပါတယ်။ ဈေးပေါပါတယ်။ သိပ်အရေးမကြီးတဲ့ Private လုပ်ငန်းတွေ Attendance system တွေမှာ အသုံးများပါတယ်။
Type B က Transportation တွေမှာ အသုံးများပါတယ် (စင်္ကာပူက EZlink ကဒ်လိုပေါ့)။ တရုတ်က ပြည်နယ်တစ်ချို့၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ ကိုးရီးယားတွေမှာ အသုံးများပါတယ်။ Card ID ၁၆ လုံးပါပါတယ်။
Type C က E-Passport တွေမှာ အသုံးများပါတယ်။ ကျတော်တွေ့ဘူးတာ ကိုးရီးယား ပါ့စ်ပို့မှာပါ။ Card ID ၃၂ လုံးပါပါတယ်။
Posted by ကိုမိုး at Tuesday, February 16, 2010 No comments:
Labels: Mifare Card, RFID, Smart Card
Felica (Sony) Card, Mifare ISO14443 A, B, C and CEPAS protocol
Singapore ရဲ့ public ကား၊ ရထားတွေမှာ ပိုက်ဆံပေးတဲ့စံနစ်မှာသုံးတဲ့ EZlink card အသစ် (၂၀၀၉ စက်တင်ဘာမှ အပြီးလဲပေးထားတဲ့ကဒ်) အမျိုးအစားပါ။ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုန်ပနီက Sony ပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် အဲဒီကဒ်ကို ဖတ်တဲ့အခါ -
၁။ Sony ကထုတ်တဲ့ Protocol (Felica) ကိုအသုံးပြုပြီး ဖတ်ရပါတယ်။
၂။ ဒါပေမယ့် ကဒ်အမျိုးအစားက Mifare (B) or ISO 14443 B ပါ။ သဘောက Mifare B ကဒ်အမျိုးအစားဖတ်နိုင်တဲ့ Reader တွေနဲ့ပဲ ရပါလိမ့်မယ်။
၃။ CEPAS (Contactless ePurse Applications) ဆိုတာက Encryption method ပါ။ ဟက်ခ် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
အဲဒီတော့ ကျတော်တို့က အဲ့ဒီကဒ်ကို သုံးပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ System တစ်ခုဖန်တီးတဲ့အခါ အဲဒီကဒ်ရဲ့ နံပါတ်ကိုပဲ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ EZlink ကဒ်တွေပေါ်မှာ ရေးထားတယ် နံပါတ် ၁၆ လုံးပေါ့။ အထဲက တန်ဖိုးတွေကို ပြင်ခွင့်မရှိပါ။
EZlink ကဒ်ကို ဖတ်လို့ရတဲ့ Reader တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ မှတ်ရမှာက Felica, ISO14443 A,B,C (C ကပါချင်မှပါပါ) ဆိုတဲ့စာလေးတွေ ပါမှ အဲဒီကဒ်ကို ဖတ်လို့ရတယ်လို့ သတ်မှတ်ရပါမယ်။
Sony (Felica) Card တည်ဆောက်ထားပုံ Felica Card Reader တစ်မျိုး
Posted by ကိုမိုး at Tuesday, February 16, 2010 1 comment:
Labels: Energy Meter, General, RFID, Smart Card
Posted by ကိုမိုး at Saturday, February 13, 2010 1 comment:
RCM54XX တွေရဲ့အားသာချက်က Zworld http mini server လေးထဲ့လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ Server ရဲ့ Foot Print က အတော်ကြီးတဲ့အတွက် တစ်ကယ်တမ်း အသေအကြေသုံးကြစတမ်းဆိုရင် Storage Area များတဲ့ (၂ ဆ၊ ဈေးလည်း ပိုပါတယ်) RCM5450 လိုကောင်နဲ့မှ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ ကျတော်သုံးတဲ့ ပုံစံက FTP server ကို အဲဒီထဲမှာ ထဲ့ပြီးတော့ Wireless Filer Transfer လောက်ပါပဲ။ http server ကို သုံးဖို့ စဉ်းစားပေမယ့်လည်း Port forwarding ကိတ်စတွေမှာ ပြသနာရှိနေတဲ့အတွက် တိုက်ရိုက် Data Access လုပ်တဲ့နည်းကို မေ့ပစ်ပြီး FTP နည်းစံနစ်ကို သုံးလိုက်ရတာပါ။
အားသာချက် နောက်တစ်ခုက Embedded WiFi Module ဖြစ်တဲ့အတွက် DHCP ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ အရင် 3700 ကတော့ Static IP ပဲ အဆင်ပြေပါတယ်။
Ref : http://www.rabbit.com/products/rcm5400W/
Posted by ကိုမိုး at Saturday, February 13, 2010 No comments:
Labels: Microcontroller, Programming, Project, Rabbit MCU, Software, Wireless, WLAN
RCM5400W ကိုကြိုက်မိတာ ဒီရက်ပိုင်းမှပါ။ အရင်ကျတော်သုံးနေကျကောင်က RCM3700, 3720 တွေ။ 3700 တွေရဲ့အားနည်းချက်က သူ့မှာ Ethernet Port တော့ပါတယ် ဒါပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းမှာ WiFi တွေကိုပဲအဓိကထားကြတာကိုး Cable တွေကအဆင်မပြေတော့တော့။ အဲ့တော့ ဒီကောင့်ကို အခုသုံးနေတဲ့ပုံစံက Acksys Wifi (Bridge) Card ကို ထပ်ထဲ့ပေးနေရတယ်။ Acksys က ဈေးကြီးတဲ့အပြင် Setting လည်း ချချပေးနေရတာကြောင့် ထပ်ရှာလိုက်တဲ့အခါ RCM5000 series ကိုတွေ့တာပဲ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာ b/ g အထိရလာတော့ အဲ့ကောင်ကို နောက်ပိုင်းမှာ သုံးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဈေးကတော့ ၂ ဆကျော်ရှိတယ်။
RCM5400W (Rabbit Core Module)
Labels: Microcontroller, Rabbit MCU, Wireless, WLAN